यी युवतीसंग विहे गर्ने केटाले साढे ३ करोड इनाम पाउने. पूरा पढ्नुहोस् – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी युवतीसंग विहे गर्ने केटाले साढे ३ करोड इनाम पाउने. पूरा पढ्नुहोस्
पहिलो सर्त ‘केटा स्मार्ट हुन जरुरी नभए पनि पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्ने’ । दोस्रो केटा मेहनती तथा लगनशील हुनुपर्ने । तेस्रो केटा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुनुपर्ने । २६ बर्षीय कर्निताले स्नातक तहसम्म पढेकी छिन् । उनी चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्नमा सक्षम रहेको बुबाको दावी छ । ति ब्यक्ति एक कृषि फार्मको मालिक रहेको बताईएको छ ।सम्पर्कको लागी तलको लिन्क खोल्नुहोस ******थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,******
आज सोमबार भगवान शिबको नाम जप्दै आजको दिनको सुरुवात गर्नुहोस , शुभ बित्नेछ तपाइको दिन
तपाईं यि चार राशिमध्ये पर्नुभयो भने ढुक्कहुनुहोस् खुल्दैछ भाग्यको ढोका
भोलिबाट नवरात्रि पूजाआजा सुरु …